EGWUREGWU KACHA ELU MAKA XBOX 360 NA OTU 2018: OGO N'ELU 10 - NSOGBU EGWUREGWU - 2019
Egwuregwu kacha mma na Xbox One na 2018 nyere ndị ọrụ ohere ịga ogologo njem iji chọpụta akụ na-abaghị uru, ịghọ ndị na-enyere aka sheriff n'ịchọpụta ihe dị mgbagwoju anya, na ịbaba n'ime udo - ịghọ ndị ọrụ ugbo dị mfe ruo oge ụfọdụ, ndị na-abụghị nanị na-akụ mkpụrụ n'onwe ha, kamakwa ha na-ere ya onwe ha. Ọbụna ohere dịgasị iche iche - na egwuregwu ndị kacha mma na Xbox 360: afọ 2018 bụ oge nke ọkpọ maka ndị agbụrụ nke ịgba egwu, ịgba ọsọ na agha.
Egwuregwu Egwuregwu 2018 maka Xbox One
Red Red Dead Redemption 2
Nnukwu mkpu 5
Ọrụ Ngwá Ọrụ 2019
Ezigbo anụ anụ: Ụwa
Oké osimiri nke ndị ohi
Egwuregwu kacha mma nke 2018 maka Xbox 360
Naanị Dance 2019
Ụwa nke tankị: Mercenaries
Ihe ka ọtụtụ n'ime ọrụ ndị na-akpali mmasị nke afọ maka Xbox One bụ ndị na-agba ụta, ihe na-eme n'ime akụkụ dị iche iche nke ụwa: site na agwaetiti dị iche iche na America na agwaetiti ndị dị omimi na oké osimiri.
Onye na-agba ụta nke onye na-agba ụta nke atọ a bụ onye na-atụ egwu Arthur Morgan, bụ onye nnọchiteanya nke ụwa anụ ọhịa Wild West. Dịka akụkụ nke òtù 20 nke mmadụ, ọ na-etinye aka n'ịgbanye otu ụlọ akụ, nke na-emezughị. Ugbu a, ndị na-awakpo ihe ọjọọ na-ezobe. Na na ha na ọ bụghị nanị na ọrụ nke onye na-ahụ maka ọrụ gị n'ụlọnga, kamakwa ndị nnọchianya nke a na-emegide òtù.
Na-enwe mmetụta dị ka onye na-egwu egwu nke Anụ West
Egwuregwu vidio egwuregwu jikọtara onye na-ese egwu, egwuregwu na-egwu egwu. Onye ọrụ ahụ nwere nhọrọ nke akụkụ nke ịlụ ọgụ:
esonye na United States Marine Corps;
kwadoro ndị agha nke ndị agha China;
ghọọ onye agha nke mmekorita nke Middle East.
Egwuregwu ahụ nwere usoro nhazi zuru oke, nke na-enye gị ohere ịrị elu na ọchịagha - usoro ahụ ga-ahọrọ ndị kachasị mara nke ndị na-enyocha ndị nwere ọtụtụ ọnụ ọgụgụ.
Ị nwere ike ịhọrọ onye akụkụ ya ga-egwu
Egwuregwu ahụ na-ewere ọnọdụ na obodo America nke na-eme ihe n'echeghị anya, ebe onye uwe ojii nọ n'ógbè ahụ na-eche otu òtù okpukpe dị egwu dị egwu. Ụwa a na-emeghe nke egwuregwu ahụ na-enye gị ohere ịgagharị n'enweghị ihe ọ bụla, onye nchịkọta akụkọ ahụ na - enye gị ohere ịhazi ọtụtụ njirimara maka agwa onye ahụ, gụnyere agba ya. Ị nwekwara ike ịhọrọ na ngwá agha. N'ụlọ agha ahụ, e nwere égbè agha, egbe igwe, ụta na ọbụna Molotov cocktails.
Nnukwu nhọrọ nke ngwá agha na-eme ka egwuregwu ahụ dịgasị iche iche.
Onye na-akwado egwuregwu ahụ bụ onye gburu mmadụ nke na-arụ ọrụ gburugburu ụwa. Na Hitman 2, onye na-egbu mmadụ aghaghị ịrụ ọrụ isii na mba dị iche iche - site na oke ọhịa dị n'oké ọhịa na megalopolises nke na-agwụ site na okpomọkụ nke n'okporo ámá. E jiri ya tụnyere akụkụ mbụ nke egwuregwu ahụ, ọtụtụ ihe ọhụrụ na-apụta ìhè ebe a, n'etiti nke a bụ ohere nke ọnọdụ multiplayer.
Na-agafe mba na ọrụ zuru ezu
Ugbua ndi mmadu na-egwuri egwu, ndi mmadu na-acho ugbua n'afo 2019 wee bido ihe kariri. Dị ka ọ dị na mbipute gara aga, onye ọrụ ga-ewulite ugbo ya ma hazie ọrụ ya nke ọma. Ma ugbua ulo oru nke nke a abawanyela n'ihi ugbo ohuru ndi America na ndi European na-aru ugbo, ihe ubi, mmekorita na owuwe ihe ubi. Tụkwasị na nke ahụ, onye ọkpụkpọ ahụ ga-egosiputa nkà na ụzụ ha, n'ihi na ọ bụghị nanị na a ga-ewe ihe ubi ahụ, kama ọ ga-enwetakwa uru.
Nke kacha mma nke simulator kachasị amasị gị
N'akụkụ ọzọ nke usoro usoro Monster Hunter a na-ewu ewu, onye ọkpụkpọ ahụ ga-eche ọtụtụ ihe dị egwu dị egwu. Enwere ọnọdụ di iche iche. Egwuregwu nkwonkwo gụnyere ihe ruru anọ. N'elu ha - nnukwu ngwá agha na ihe nchedo site na nnukwu anụ. Otu n'ime njirimara nke egwuregwu ahụ bụ na a ga-etinye ya nke ọma ka ọ ghara ime mmehie dị njọ. Ya mere, ọ bara uru ịkwadebe n'ọdịnihu: ozi ahụ nwere ike iwe oge dị ukwuu.
Egwuregwu ahụ zuru oke maka Fans nke akụkọ ifo
Egwuregwu egwuregwu na mbara igwe na-eme ka ndị ọrụ chee na ọ bụ "anụ ọhịa wolves" n'ezie - ndị dinta akụ. Iji nweta akụ ahụ, ndị egwuregwu ga-ekere òkè n'ọtụtụ agha ma chọpụta ihe karịrị otu agwaetiti mara mma. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ịchọrọ, onye gamer nwere ohere ịnwale onwe ya na ọrụ dị iche iche: onye na-azụ ahịa udo, onye nwe ya flotilla ma ọ bụ onye na-apụnara mmadụ ihe na-ebu agha na-ebute ụgbọ mmiri ndị ọzọ.
Na egwuregwu a, ị ga-enwe ụtọ ihe nkiri na-akpali akpali.
Loud Premier maka Xbox 360 maka ọnwa 12 bụ ntakịrị. N'otu oge ahụ, ha gbanwere ka e mepụtara maka ndị na-ege ntị dị iche.
Onye na-akpali akpali football na-enye gị ohere ịhọrọ otu n'ime ụdị usoro egwuregwu, ọnụ ọgụgụ n'ime ụdị ọhụrụ nke ọrụ ahụ abawanyewanye. Dịka ọmụmaatụ, usoro "Iwu adịghị" na-enye ndị egwuregwu aka n'enweghị ntaramahụhụ (na-enweghị ịdọ aka ná ntị maka ya) ka ọ bụrụ ihe ọjọọ. Ọ bụ ezie na ọnọdụ "Ịlanahụ" na-ebelata ọnụ ọgụgụ ndị otu egwuregwu mgbe ihe mgbaru ọsọ nke ọ bụla gasịrị, wepụ otu onye na-eme egwuregwu si otu mba. A na-enye atụmatụ ndị a na-atụghị anya ya site na mode "Play to ...": ebe onye ọrụ ahụ n'onwe ya na-ekpebi ụfọdụ iwu maka ndị egwuregwu ahụ ma tinye ihe mgbaru ọsọ ahụ maka ìgwè. Na mgbakwunye na football, egwuregwu ahụ nwekwara akụkọ azụmahịa: ndị na-egwu kpakpando nwere ike ịmalite ụdị nke ha ma nata ha ụgwọ.
Otu n'ime egwuregwu ndị kacha ewu ewu na afọ ndị na-adịbeghị anya.
Ngalaba ohuru nke egwu egwu na egwu egwu. Mgbe mkpochapụ nke ndị na-agba egwú bụ listi gbasaa gbasaa (ọ gbasaa site na abụ ọhụrụ 40), yana ọtụtụ njirimara ndị ọzọ. N'ihi ya, a na-agbakwunye egwu ụmụ asatọ, nke a kwadoro maka ọrụ ahụ site na ndị ọkachamara maka mmepe ụmụaka. Ugbu a, ụmụaka ga-enwe ike ịgba egwú na Just Dance, ha ga-akwado site na usoro nyocha nke onye ọ bụla na ụkpụrụ isi ihe, yana ndị nkụzi na-agba egwú nke ụmụaka na-etinye n'ime egwuregwu ahụ.
Zuru oke ma ụmụaka ma ndị okenye.
Usoro usoro ihe ndia nke ndi na-emepe nke Belarus na-eweta oru ngo a. Uche nke ndị ọrụ bụ ugbo agha, nke na-adịghị adị na ọdịdị. Ọtụtụ n'ime ha ejikọtawo onwe ha ihe omume na-akpali mmasị site n'aka ndị okike nke tankị si gburugburu ụwa. Dịka ọmụmaatụ, ozu ndị ụfọdụ n'ime ụdị ndị ahụ bụ ndị Soviet, ụlọ elu, America, na egbe, German. Egwuregwu ahụ enwetawokwa mmelite dị iche iche - ọ ghọọwanye ihe mgbagwoju anya, n'ihi na ndị agha na-aga agha na-eche ugbu a egwu.
Ụdị ọhụrụ nke egwuregwu kachasị amasị
2018 emeghị ka ndị nwe Xbox One na Xbox 360 pụta ìhè. Egwuregwu ọhụrụ ndị sitere na Jenụwarị ruo December mere ka ha nwee ohere iji oge na-aga, ọ bụghị naanị na-adọrọ mmasị, kamakwa uru: imikpu onwe gị n'omenala nke mba ndị ọzọ, meziwanye ihe ọmụma nke azụmahịa gị ma mụta ịgba egwu - n'okpuru nduzi nke ndị nkuzi.